Borg Backup: Rafitra fitantanana backup tsara | Avy amin'ny Linux
Borg Backup: Rafitra fitantanana backup tsara
Todo mpampiasa, ho iray mahazatra, mandroso na ara-teknika, tokony hiezaka hihazona ny anao ianao Rafitra miasa, tsy vitan'ny hoe nohavaozina, fa voaaro amin'ny fandrahonana sy tranga cybertoy ny virus, fidirana an-keriny tsy ara-dalàna, fahasimban'ny fitaovana ary fatiantoka ampahany na totalin'ny data, amin'ny haino aman-jery fitahirizana.
Ho an'ity olana voalaza farany ity dia misy maro fitaovana rindrambaiko (programa / fampiharana) azo alaina ao amin'ny anay Rafitra miasa maimaim-poana sy misokatra, miorina amin'ny GNU / Linux. Ary ny iray tamin'izy ireo, nantsoina Borg Backup, Tsara izany rafitra fitantanana backup.
Ambonin'izany rehetra izany, ny olan'ny backup na backup, na ny mekanisma hafa momba ny «Avereno, avereno, avereno, na miverena fotsiny amin'ny fanjakana fanombohana na fanafoanana ny GNU / Linux Distros anay»Anisan'izany ny fampahalalana (manokana na asa) voatahiry, matetika dia teboka tena lehibe izy io ho an'ireo mpampiasa GNU / Linux mafana fo, satria amin'ny ankapobeny dia manandrana fikirakirana vaovao na rindranasa vaovao izy ireo, ary ireo distrika GNU / Linux vaovao efa ela kokoa. tsindraindray.
1.1 Fanamarihana lehibe momba ny backup
2 Borg Backup: Rafitra fitantanana backup
2.1 Inona ny Borg Backup?
2.2 Endri-javatra sy Vaovao
2.2.1 Fomba fiasa lehibe
2.2.2 Inona ny vaovao
2.3 Data hafa manan-danja hafa
2.4 Inona no atao hoe fanamasinana?
Antony nahoana, ao amin'ny Blog FromLinux Efa nanao fanontana hafa mifandraika amin'ity lohahevitra ity izahay izay nanoro hevitra anay hikaroka sy hamaky. Santionany kely amin'ny sasany amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
Resetter: Ahoana ny famerenana ireo Distros miorina amin'ny Debian / Ubuntu?
Rescuezilla 1.0.5.1: Misy ny kinova vaovao manomboka amin'ny volana martsa 2020
Systemback: Backup, System Restore ary maro hafa
Ahoana ny fomba hanaovana Data Backup amin'ny fitaovana amin'ny fampiasana Shell Scripting?
hafa fampiharana mahaliana sy ilaina, izay tsara homarihina dia: Deja Dup, Rsyncary Aptik.
Fanamarihana lehibe momba ny backup
Rehefa manao asa na hetsika fanaovan-dronono, hiarovana ny mombamomba anay (angona) sy ny Rafitra miasa, ny fomba fanao tsara amin'ity lohahevitra ity, mazàna amin'ny maro hafa, dia manasongadina fitsipika iray antsoina hoe «3-2-1 ″, satria mametraka ireto toro lalana manaraka ireto harahina:
Manana kopia backup telo (3) farafahakeliny farafahakeliny.
Mitehirizana backup roa (2) farafahakeliny amin'ny toerana anatiny samihafa.
Arovy farafahakeliny iray (1) ny backups amin'ny toerana ivelan'ny toerana.
Borg Backup: Rafitra fitantanana backup
Inona ny Borg Backup?
Borg Backup, araka ny filazan'ny mpamolavola azy ireo tranonkala ofisialy, dia:
"Fandaharana famerenana fanokanana. Raha azo atao, manohana ny famatrarana sy ny fanamarihana voamarina izy io. Ny tena tanjon'izy ireo dia ny hanome fomba mahomby sy azo antoka hanaovana kopia data. Ny teknikan'ny fanaparitahana angona ampiasaina dia mahatonga an'i Borg ho mety amin'ny famandrihana isan'andro satria ny fanovana ihany no voatahiry. Ny teknikan'ny encryption voamarina dia mahatonga azy ho mety amin'ny famerenana ireo tanjona tsy azo atokisana".
Endri-javatra sy Vaovao
Fitehirizana habaka kapila mahomby: Manatontosa deduplication mifototra amin'ny chunking voafaritra votoaty izay ampiasaina mba hampihenana ny isan'ireo bytes voatahiry: izay fizarana tsirairay dia zaraina ho sakelika misy halava miovaova ary ny sakana izay mbola tsy nampiana akory no ampiana ao amin'ny tahiry. hita teo aloha.
hafainganam-pandeha: Manana fahombiazana tena tsara izy io satria ny kaody fitsikera-pitsarana azy dia ampiharina ao amin'ny C / Cython, manao cache / data cache eo an-toerana, ary manatanteraka fitiliana mahomby ireo rakitra tsy miova.
Enkripsi data: Ahafahanao miaro ny angona rehetra amin'ny alàlan'ny enkripsi 256-bit AES, raha ny fahamendrehana sy ny fahamarinan'ny angon-drakitra kosa dia voamarina amin'ny alàlan'ny HMAC-SHA256. Ary ny angon-drakitra dia voahidy amin'ny lafiny client.
famatrarana: Manamora ny famerana ny angon-drakitra rehetra, amin'ireto endrika manaraka ireto: lz4 (faran'izay haingana, famatrarana ambany), zstd (avy amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha avo sy ambany ambany ka hatramin'ny famatrarana avo sy haingam-pandeha ambany), zlib (hafainganam-pandeha sy faneriterena ), ary lzma (haingam-pandeha, famoretana avo).
Famahanana ivelany: Ahafahanao mitahiry angona amin'ny mpampiantrano lavitra azo alefa amin'ny SSH. Ho fanampin'izany, mamela ny backup hametraka azy ho rafitra fisie.
Fametrahana mora amin'ny sehatra marobe: Manolotra mimari-droa (installer) izay tsy mila apetraka akory izy, mihazakazaka sy mampiasa fotsiny, amin'ireo sehatra ireo: Linux, Mac OS X, FreeBSD, ankoatry ny hafa, toy ny Windows 10 Linux Subsystem (Amin'ny endrika andrana).
Rindrambaiko loharano malalaka sy misokatra: Nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana BSD (andalana 3).
Mandalo ny kinova nomer 1.1.1 izy io izao, izay mitondra an'ity fiasa vaovao manaraka ity:
Ahitana fanatsarana ny fizotry ny fifindra-monina avy ao amin'ny Borg 1.0.x ka hatramin'ny 1.1.x
Manala ny autodetection WSL (Subsystem Windows 10 ho an'ny Linux).
Nanavao ny fonosana lz4 ho an'ny kinova 1.9.2 sy ny fonosana zstd ho an'ny kinova 1.4.4
Manampy fanampiana ho an'ireo sehatra tsy misy os.link (oh: Android miaraka amin'ny Termux)
Manampy ny tohana ho an'ny sehatra Linux tsy misy sync_file_range.
Data hafa manan-danja hafa
Para Borg Backup, izay programa Terminal (CLI) efa noforonina Fandraisana interface (GUI) ho fampiasana tsara kokoa. Anisan'izany ireto:
Borgweb: Ho an'ny Linux
Mpanjifa backup Vorta: Ho an'ny Linux, MacOS ary Windows.
Raha mila fanazavana fanampiny momba Borgweb y Vorta azonao atao ny mitsidika ny tranonkalany avy GitHub. Na izany aza, BorgWeb manana toerana fanoloana hafa sy ny hafa tranonkala mifandraika tsy ho ela dia hanolotra fampahalalana marobe momba izany izy.
Teknika fanodinana izany manafoana ny angon-drakitra voatahiry be loatra, mitazona kopia iray mitovy amin'ireo data, ary manolo kopia miverimberina amin'ny tondro manondro an'io kopia tokana io. Noho izany, ity teknika ity dia mitahiry indray mandeha monja ny rakitra ary manolo ny hafa amin'ny rohy mankany amin'io rakitra io, na ny tondro iray manondro an'ity kopia tokana ity. Mahavita ity rafitra ity mitahiry habaka alain'ny backups, izay manatsara ny fampiasana ny habaka sy ny vidiny mifandraika amin'ireo haino aman-jery ireo, ho fanampin'ny manamora ny fanarenana data haingana kokoa amin'ny kopia (backup).
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Borg Backup», rafitra fitantanana backup maimaimpoana malalaka sy malalaka, tena mahomby sy mahomby; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Borg Backup: Rafitra fitantanana backup tsara
AMD sy Samsung: fifanekena hanatsarana ny filalaovana amin'ny Android